Shwe Mudra | Shwe Mudar
စိတ်ထားဖြူစွာ မြတ်သံဃာ ရည်စူးလှူပါ ရွှေမုဒြာ
ရွှေမုဒြာ ဆပ်ပြာရည်ဆိုတာ သာမန်ဆပ်ပြာရည်တွေ နဲ့မတူတာကတော့
သာမန်ဆပ်ပြာရည်များအများစုဟာ အနံ့ဆိုးများပျောက်အောင် တိရိစ္ဆာန်လေးများနှင့် စမ်းသပ်ထားသော animal tested artificial scent, artificial fragrance တွေနဲ့ဖော်စပ်ထားကြတာပါ။ရွှေမုဒြာ ဆပ်ပြာရည်များကတော့ ရဟန်း၊သံဃာတော်များအသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်တော်အောင် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် animal tested artificial fragrance များမပါဝင်ပဲ သဘာဝကုန်ကြမ်း သစ်သီးသစ်ဖုများမှ အဆီအနှစ် ကိုထုတ်ယူကာ အဆင့်မြင့် formula များနဲ့ဂရုတစိုက်ပေါင်းစပ်ပီး အဝတ်များတွင်စွဲကျန်နေသော အနံ့ဆိုးများ မှိုများကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်အောင် စီမံ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Vegan, Cruelty-free product များဖြစ်ပါတယ်။
သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်း၊သံဃာတော်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည််အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်း၊ အဆင့်မြင့် formula နည်းပညာများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သော “Made In Myanmar” brandတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သံဃာတော်များအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ပထမဆုံးသောသင်္ဃန်းလျှော်ဆပ်ပြာရည်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုလိုမိုးတွင်းမှာဆိုသင်္ဃန်းများဟာ ခြောက်ဖို့ မလွယ်တာကြောင့် အစိုနံ့များ ရနေတတ်ပါတယ်။
အခု ဒါတွေကို စိတ်မပူပါနဲ့တော့ ရွှေမုဒြာ သင်္ဃန်းလျှော်ဆပ်ပြာရှိနေပါပြီ
ရွှေမုဒြာသင်္ကန်းလျှော်ဆပ်ပြာရည်ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ သင်္ဃန်းမခြောက်ရင်ထွက်တဲ့အနံ့ဆိုးများကို အမွှေးအကြိုင်များသုံစရာမလိုပဲနဲ့ အနံ့ဆိုးများမကျန်နိုင်အောင်ဖော်မြူလာသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်သံင်္ဃာတော်များအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
ဝိနည်းတော်နဲ့ အညီ သန့်စင်သော ကုန်ကြမ်းများကိုသာဂရုတစိုက်အဓိကထားရွေးခြယ်အသုံးပြုထားတာ ကြောင့် သင်တော့်သော လှူဖွယ် ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်တာ အသေအချာပါပဲ။
ရွှေမုဒြာရေချိုးဆပ်ပြာရည် ( စန္ဒကူးဆီ)
စန္ဒကူးနံ့သာဆိုတာကတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားအားပူဇော်ရာတွင် အသုံးပြုသောနံ့သာမျိုးဖြစ်ပါသည်။
တိရိစ္ဆာန်အဆီများနဲ့စမ်းသတ်ခြင်းကင်းရှင်းသောကုန်ကြမ်းများကိုသာဂရုတစိုက်အဓိကထားရွေးခြယ် အသုံးပြုပြီး ဝိနည်းတော်နဲ့အညီထုတ်လုပ်ပေးထားသော ပထမဆုံးသော သံဃာတော်သုံး ရေချိုးဆပ်ပြာရည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်ကို ဝိနည်းနဲ့ အညီထုတ်လုပ်ထားပါသည်ဆိုတော့ မေးစရာတွေ ရှိလာမှာပဲပေါ့။
ဥပမာ တစ်ခုပ ဲပြောရရင် ယနေ့ခေတ်သုံးစွဲနေကြတဲ့ လူသုံး
စန္ဒကူးဆီစစ်စစ်ဟာ အပင်မှထုတ်ယူထားသော အဆီစစ်စစ် ဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတည်းက ပူဇော်ကြရာမှာ အသုံးပြုကြတဲ့ နံ့သာအမျိုးအစား တွေထဲကမှ တမျိုးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်အဆီများနဲ့စမ်းသတ်ခြင်းကင်းရှင်းသောကုန်ကြမ်းများကိုသာဂရုတစိုက်အဓိကထားရွေးခြယ် အသုံးပြုပြီး ဝိနည်းတော်နဲ့အညီထုတ်လုပ်ပေးထားသော ပထမဆုံးသော သံဃာတော်သုံး ရေချိုးဆပ်ပြာရည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်ကို ဝိနည်းနဲ့ အညီထုတ်လုပ်ထားပါသည်ဆိုတော့ မေးစရာ
No(53),Kokkine Avenue Street,
Golden Valley (2),Bahan,Yangon,Myanmar.
E-mail : info@shwemudar.com
Phone : 959 7651 3748
Golden Valley (2)
(304) 765 137 481
© 2019 Shwe Mudra Monastic Co.,ltd. Designed by RealHost Myanmar
စိတ်ထားဖြူစွာ မြတ်သံဃာ ရည်စူးလှူပါ ရွှေမုဒြ Dismiss